एनआरएनए पोर्चुगलका पदाधिकारीहरुको दादागिरी : पाँचौपटक नेपाली कुटे, अध्यक्ष गैरे कारवाही गर्नुको सट्टा बचाउने खेलमा ! - VOICE OF NEPAL
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०२:५१
1955 ??? ???????
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राष्ट्रिय समन्वय परिषद पोर्तुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमसेन थापा, कोषाध्यक्ष विक्रमजङ कुँवर र मनोनित सदस्य विशाल आचार्यले मिलन रेग्मी र रोशन उप्रेतीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेका छन्। एनआरएनए पोर्तुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले मान्छे कुटेको पहिलो घटना भने होइन। उनले कतिलाई कुटे त्यसको लेखाजोखा छैन, तर समाजमा बाहिर आएका घटनामा नेपाली कुटेको यो पाँचौ घटना हो।
थापाले कार्यसमिति सदस्य हुदा ३ छुट्टाछुट्टै घटनामा ३ जना नेपालीलाई कुटेका थिए भने हालको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा ३ जना नेपालीलाई कुटेका छन्। आफ्नो बिरुद्धमा बोल्ने र लेख्नेलाई बाँकी नराख्ने धम्की दिने गरेका कारण कुटाई खाने डरले उपाध्यक्ष थापाको बिरुद्धमा पोर्चुगलको नेपाली समाजका अगुवाहरु बोल्न र लेख्न डराउछन्।
आक्रमणबाट रेग्मीको कानको लोटी च्याट्टिएर रगताम्मे भएका थिए । हातगोडामासमेत चोटपटक लागेको छ । उप्रेतीको खुट्टा, घुँडा र कुहिनामा चोटपटकसहित गहिरो दुखाइका कारण अस्पताल गएका थिए । उनीहरु उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
एनआरएनए पोर्तुगलका अध्यक्ष तिलक गैरेले मान्छे कुट्ने आफ्नै कार्यसमिति पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै बचाउने खेलमा लागेका छन्। घटनालाई भित्रभित्र सामसुम पार्ने र मिलापत्र गर्ने बारम्बार मारपिट गर्ने र संघको साख गिराउने काम गर्नेहरुलाई समेत बचाउने रणनीतिमा लागिपरेका छन्।
घटनाका पीडित रेग्मीले घटनालाई लिएर समाजमा अनेकौ प्रपोगन्डा सुनिएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य र यथार्थपरक छानबीनसहित न्याय पाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । समाज यसरी नै चल्छ भन्ने हो भने पोर्तुगलको नेपाली समाज ब्राजिल हुने बताउदै प्रतिशोधको भावना बढेर जाने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको पक्षमा सारा पोर्तुगलका नेपाली समुदाय एक ढिक्का भएर लाग्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष तिलक गैरे हल्का कागजात लेखेर घटनालाई थामथुम पार्न लागिपरेका छन्। तर यही घटनालाई लिएर एनआरएनए पोर्चुगलभित्र रडाको मच्चिएको छ।
संघका उपाध्यक्ष अशोक गुरुङले गलत कार्य गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा उल्टै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पीडकलाई कार्बाही नगरी उल्टै उनीहरुकै समर्थन गर्ने, प्रसय दिंदा पीडकलाई झनै गलत कार्य गर्न हौसला मिलेको हुनाले अङ्कुश लगाउन अनुरोध गरेका छन् । नेतृत्वले संघको गरिमामा आँच आउने र बारम्बार नेपालीहरुलाई नै कुटपिट गर्नेहरुमाथि कारवाही नगरे संघभित्र बिद्रोह गर्ने बताएका छन्।
यस अघि पनि उपाध्यक्ष थापाले ९ फेब्रुअरीका दिन लिस्बनमा सम्पन्न एक म्युजिकल कन्सर्ट स्थलमा समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकार तथा एनआरएनए सदस्य सवीन धितालमाथि पनि हातपात गरेका थिए । पोर्तुगलको नेपाली समुदायमा त्यो घटनाले निकै हलचल ल्याउनुको साथै संघ र त्यसको नेतृत्व निकै आलोचित बनेको थियो। जतिनै सुकै बिरोध भएपनि एनआरएनए अध्यक्ष तिलक गैरे तीन महिनासम्म घटनाको बारेमा मौन बस्दै उल्टै घटनाका पिडित धिताललाई नै दोषी देखाएर हातपात गर्ने थापालाई बचाउने काम गरेका थिए।
पत्रकार तथा संघका सदस्य धितालमाथि कुटपिट गरेको घटनाको उजुरी संघको केन्द्रमा पुगेको छ। केन्द्रले घटनाको छानविन गरिरहेको बिशेष श्रोतबाट खबर प्राप्त भएको छ।